Si aad ugu badan ee dadka, oo ay ku jiraan i, xiriirada waa waxa ugu muhiimsan in aan marnaba dooneynin inuu u badiyo, sababtoo ah si daacad ah, inta badan oo naga mid ah oo aan hubin sida aynu doonayno inaynu u mar kale u helaan haddii aan weligood laga badiyay.
Thanks to technology, arrintan ayaa loo xalin iyadoo la kaashanayo hayaan, oo ma aha oo kaliya ayaa naga caawiyay inaan sii xogta gaarka ah noo amaan ah, laakiin waxa uu sidoo kale naga caawisay la soo guuray ka mid smartphone in kale, oo sida caadiga ah dhaca laba jeer sannadkii, ugu yaraan. Qodobadaan waa kuwa ka oo dhan isticmaala iPhone oo aanay ka warqabin sida in ay dib u kor xiriirada iyo waxaan doonayaa in aan fahmo in ka badan qaar ka mid ah Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo degeen codso dadka isticmaala.
Ma Lugood gurmad xiriiro?
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee dadka ka codsanaynaa dhammaan internet-ka oo ay tahay si caddaalad ah wareer, maxaa yeelay, Apple si joogto ah isaga oo intaa raaciyay qaababka cusub oo la mid ah magacyada bedelay sifooyinka la mid ah in ay la socdaan Lugood yimid markii hore.
Haa, aad dib kartaa marka aad la xiriirayso Lugood by socda tallaabooyin yar oo sahlan. Waxaan aad ugu boorinayna oo dhan iPhone la shaqayn jiray iyo dadka isticmaala iPad in ay dib ay macluumaad la Lugood, gaar ahaan, xiriirrada si ay u yihiin hal meel. Marka aad xoojiyaa aad la xiriirayso Lugood marnaba ma yeelan doonaan in ay la kulmaan dhibaato in dib u helo haddii uu kaa lumo casriga ah ama haddii aad doonayso inaad cusboonaysiiso aad casriga ah ama qalab kiniin galay cusub ah mid.
Sawirrada socda muujiyaan feature aad u leeyihiin in ay awood ku Lugood, si ay dib ilaa aad xiriirka la leedahay.
Sida loo raad raac xiriirada iPhone isticmaalaya Wondershare MobileTrans
Dad badan waa in uu ahaado cajiib ah oo ku saabsan meesha ama ma software kale oo loo isticmaali karaa ujeedada ay taageerto kor u soo xiriiro. Waxaa jira sababo sababta Lugood Ma laga yaabaa in doorasho kama dambaysta ah dhowr isticmaala iPhone. Iyadoo Lugood marnaba ma awoodi doonaan in ay arkaan xiriir ah, halkii ay u baahnaan doontaa inaad iyaga gadaal ilaa iPhone ama iPad ah oo iyaga u arkaan dhex Xiriirada ama codsiga Phone ah.
Haddii aad su'aal qabto sida badan codsigan ku kici lahaa, ka dibna waxaad ugu farxi lahayd in ay ogaadaan in Wondershare MobileTrans aan xitaa ku kici doona dime ah. Sawirrada socda ay muujiyaan hab stepwise dhinaca taageerto ilaa xiriir adiga oo isticmaalaya Wondershare.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi codsiga aad Windows ama Mac.
Tallaabada 2. Ka dib markii ay ku rakibidda codsiga rogtid oo aad PC lagu soo bandhigi doonaa in aad shaashadda la interface soo socda ka dib markii ay isku xidha aad casriga ah si ay u PC isticmaalaya cable USB ah. Riix "dib Your Phone" button.
Tallaabada 3. Sax checkbox ka dhanka ah Xiriirada iyo dooro Start Copy.
Tallaabada 4. Codsiga waxaa bilaaban doona taageero ilaa xiriir ah oo ay la socdaan dhacdooyinka ka dhanka ah xiriir kasta. Marka geedi socodku waa dhameystiran lagu soo bandhigi doonaa in aad fariin ku leh, aad si guul leh ku taageeray ayaa ilaa aad xiriirka la leedahay.
Top 3 macruufka Apps in Xiriirada kaabta
Waxa ugu fiican ee ku saabsan casriga ah ka Apple waa in aad hesho si aad go'aan ka dhowr codsiyada iyo mid la mid ah qaababka ugu fiican qaado. Features, in ku haboon yihiin si aad u baahan yahay. Ka dib waa 3 of codsiyada ugu wanaagsan in aan qabaa in qof walba waa in aad baadhid, si ay u soo qaado ugu fiican ee mid ka mid iyaga ka mid ah.
My Xiriirada Pro kaabta
By GLOBIL Aqbaarta
My Xiriirada Back Up Pro kuu ogolaanaysaa inaad kala doorato la abuuro gurmad ah oo noocyo kala duwan, oo ay ku jiraan, vCard ama CSV (Excel) qaab. Lahaanshaha khiyaar ah ee doorashada ka qaabab kala duwan ogolaanaysaa kuwa isticmaala kuwaas oo doonaya in ay u gudbiyaan xiriirada ay galeen qalab kale ama codsi kale sida ugu fudud u heli karaan.
Muuqaal kale oo la yaab leh this codsiga macruufka gudahood waa awooda u user in ay si toos ah xiriir geliyaan si ay u DropBox. Tani feature si caddaalad ah oo dhif ah oo aan si fudud jeclahay.
Waxaa intaa dheer, codsiga aad xusuusisaa ku saabsan taageero ilaa aad xiriirka la leedahay ee toddobaadlaha ah via xusuusinta deegaanka. Sidaas daraaddeed, marna ma seegi uu uga mid noqdo ilaa macluumaadkaaga.
Xiriirada kaabta ka badan DropBox Lite
By Paul Kanzelsberger
Sida magacaba ka muuqata, codsiga taageeray ilaa aad la xiriirayso DropBox. Codsiga bixisaa feature aad u qummaati eego functionalities, laakiin tani keliya ayaa caawisay in codsiga gacan la warkiisiina oo dhan in uu helay, waxa uu u. Dadka Kuwa jecelnahay in dhowr nuqul ka mid ah xiriirada ay DropBox jeclaan lahaa isticmaalaya codsiga.
Xiriirada kaabta - kaabta Easy
Kaabta Easy waa codsi macruufka ah taas oo dhamaan xiriirada ku saabsan casriga ah, oo ay ku jiraan kuwa ku iCloud, Facebook, Twitter iyo iyaga oo taageeray keligood VCF ama qaab kaarka. Codsiga ka dibna sii dayn doonaa inaad ka soo xusho, haddii aad rabto in aad ku kaydiso xiriirada ku saabsan qalab aad ama u dhoofin dhex email. Codsi aad u faa'iido badan oo wax ku ool u ah ujeedada hindisaha gurmad ah oo nadiif ah oo aad xiriirka la leedahay.
> Resource > Lugood > ma kaabta Lugood Xiriirada?